Lalao iPlayer: Tidal Trek aterineto. Play maimaim-poana
Lalao iPlayer: Tidal Trek an-tserasera
Lalao Online Action Games fikatsahana lalao Games ho an'ny ankizilahy Shooting Games Adventure Online Games Mpiady Jiolahin-tsambo sambo iPlayer Games VKontakte Mpiara-mianatra Games Game Mile Roux
Lalao an-dranomasina ho an'ny lehiben'ny hatezerana
Ny lohahevitry ny piraty dia manohy mampitony ny fisainan'ny romantika sy ny aventure. Iza amin'ireo ankizilahy ireo dia tsy naneho ny tenany ho kapitenin-tsefatsefan'ny sambo misy rano misy sainam-pirenena mainty miaraka amin'i Jolly Roger izay mirehareha amin'ny onja mahery vaika? Ny lalao ady an-dranomasina dia manokatra ny lalana mankany amin'ny fiainana tsy nisy toa azy, ny loza, ny dia, ny ady. Miaraka amin'ireo mpilalao hafa, dia milalao ny Ranomasina Sea ianao, manamboatra ny nosy misy anao, manatanjaka ny flotilla, miady amin'ny fahavalo amin'ny fiaramanidina: amin'ny rano, any amin'ny lalina ary eny amin'ny lanitra. Hahazo ny PVE sy ny PVP ady, ny ady goavana ao amin'ny guild, ary koa ny fifandonana mifototra amin'ny orinasa misy ny biby fiompinao. History of events
Miaina toy izany koa ny fiainana piritra mahafinaritra toy izany satria mitaky antsika amin'ny taonjato maro ny olona nanao dingana lehibe tamin'ny fandresena ny singa rano. Nianatra nanamboatra sambo izy ireo, ka nalefan'izy ireo tany lavitra. Nahatonga anay hahita firenena vaovao maro avy amin'ny firenena samihafa amin'ny kolontsainy manokana izany. Ny dingana iray vaovao eo amin'ny fampandrosoana ny varotra dia efa nanomboka, satria ny tsena tsy misy marika dia tsena hafa, ary koa ny fahafahana hahazo zavatra manokana ho an'ny tenanao. Raha toa ianao ka milalao ny lalao Battleship, dia toa ianao no mamerina indray ny fahafahana rehetra hanatsarana sy hampanan-karena. Fa raha misy tombony azo, dia andraso foana ny fifandonana sy ny mpangalatra izay te hiaina eo am-piomanana. Raha manatsara ny fifanaraham-barotra ny mpivarotra ary mahazo vola bebe kokoa, ny andian-jiolahimboto dia manantena ireo karavasy voavoly amin'ny sarobidy, ary mandroba azy ireo. Ankoatr'izany, ny fahafatesan'ny emperora dia nitarika ny fihenan'ny toe-karenan'ny toekarena, ary ny fifandirana teo amin'i Aldrichs avy any atsinanana ary i Douglas avy any amin'ny Tandrefana dia nanomboka, izay nanjary tsikelikely tamin'ny ady misokatra izay nipoaka tao amin'ny Bay of Black Waters. Nihabetsaka ny mpikomy, ary nanjary nanamontsana ny tany avaratra izy ireo, nanomboka nanararaotra ny Ranomasina Atsimo. Pirates ho amin'ny ady! Ny Adventure dia manomboka ny fisoratana anarana ho an'ny ranomasina, dia misafidy ny fisehoanao amin'ny sary roa lahy sy vavy anankiroa, avy eo mifankahafantatra amin'ny mpanampy, izay mahafeno anao, ary mampiditra ny fitsipika, ny zava-mitranga, manome ny asa ary manampy hanatanteraka izany. Ny batemy voalohany dia ny ady amin'ny biby goavam-be iray - sokatra lehibe. Ity ady ity dia hampiseho ny fahaiza-manaony sy ny fitsipiky ny fifehezana alohan'ny handefasana anao hanao iraka lehibe kokoa amin'ny Battleship iPlayer. Nandroaka ny ainao ianao taorian'ny sambo kely iray, ary ny sambo tokana azonao ampiasaina dia sambo kely. Hiaiky ianao fa tsy hiady amin'ny fiara misidina toy izany, ary mila maika haingana be ianao. Miantso zavatra foana ny toerana ao an-toerana, ary antony lehibe iray hanangonam-bola azy ireo izany mba hananganana sambo tena izy. Mitombo tsikelikely ny vola raisinao amin'ny traikefa, izay ahafahanao manitatra ny sambonao miaraka amin'ny sambo vaovao, ary manatanjaka ny fototra ao amin'ny nosy, ary na ny fianarana ny siansa momba ny varotra aza. Ireo ady ao amin'ny Tidal Trek dia tarihina eo amin'ny sehatry ny hetsika isan-kerinandro, ary ianao dia mahazo ny anjara asan'ny stratejia izay mametraka ny mpandray anjara amin'ny ady. Rehefa tonga any amin'ny toerana iray ianao, dia azonao atao ny manakarama ireo tompon-daka ary mampianatra azy ireo fahaiza-manao tsy manam-paharoa izay hanampy azy amin'ny ady. Rehefa manana biby fiompy ianao, dia handray anjara amin'ny fampivoarana ny fisehoan-javatra koa izy. Fa tsy ady iray dia mahaliana lalao. Tandremo ny fandaminana ny nosy, satria izy koa dia ampahany manan-danja amin'ny fandrosoana. • Manor - trano lehibe ao amin'ilay nosy. Raha tsy misy izany dia tsy azo atao ny fampivoarana sy ny fanangonana hetra. • Timber - manampy amin'ny fanangonana ny habetsaky ny hazo ilaina amin'ny fanorenana sambo. • Doc - manome fitaovana fanampiny. • Fandefasana entana - manintona ireo mpiadina manana valisoa mahavariana.
iPlayer: Galactic ny fiainana
iPlayer: Mila ny Hero
iPlayer: Pirates samonta ny Fortune
iPlayer: Sparta Ady ny Fanjakana Natanjaka
iPlayer: ambin 'ny daomy -tserasera
iPlayer: Backgammon an-tserasera
iPlayer: Battlegrounds ny Eldhelm
iPlayer: any an-danitra
iPlayer: Fiara Mifono Vy Online
iPlayer: Star Fifandirana
iPlayer: Castle Mahafaty ny lalao
iPlayer: Total fanapahana
iPlayer: miaramila Inc
iPlayer: Eo amin'ny toeram-pambolena
iPlayer: Desert asan'ny fanahy